स्थानीय चुनावमा भोट कसरी हाल्ने ? पढ्नुहोस् ध्यानदिनुपर्ने ४ कुरा | मेरो नेपाल अनलाइन
को-को हुन त बामदेबलाई बर्दियामा हराउने खलनायक
वामदेव गौतम माथि अन्तर्घात ?
बर्दियाका चार मध्ये २ वटा प्रददेश सभामा वाम गठबन्धन विजयी
कम्युनिष्ट सरकार, समृद्धि र अधिनायकवाद : कति भ्रम, कति यर्थाथ ?
प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक, बाम गठबन्धनको ६ सय ५ मतको अग्रता
बर्दियामा निर्वाचन शान्तिपुर्ण रुपमा सम्पन्न, गणना शुक्रबार बिहान देखि
बर्दियामा निर्वाचन शान्त बाताबरणमा चल्दै
मसला प्रसोधन तथा बजारिकरण उपआयोजना बाँसगढीको तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाई ।।
बर्दियामा बम बिस्फोट गराईएको घटना प्रति नयाँ शक्ति बदिर्याको ध्यानाकर्षण
बर्दियामा ३ सय २९ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न पाउने
Home मुख्य समाचार स्थानीय चुनावमा भोट कसरी हाल्ने ? पढ्नुहोस् ध्यानदिनुपर्ने ४ कुरा
स्थानीय चुनावमा भोट कसरी हाल्ने ? पढ्नुहोस् ध्यानदिनुपर्ने ४ कुरा
Posted By: Mero Nepal Onlineon: १७ बैशाख, २०७४ In: मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाचारNo Comments
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र कस्तो होला ? एकजनाले कति ठाउँमा छाप लगाउनुपर्ला ? यसबारे धेरै मतदाताहरु अझै पनि दुविधामा छन् ।
मतदान गर्न केहि दिनमात्र बाँकी रहँदा मतदाताहरुमा मतदान प्रक्रियाबारे अझै अन्योल हटेको छैन । उसोभए आगामी निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने त ? यहाँ केही टिप्सहरु दिइएको छः
१. मतदाता नामावलीमा नाम नभए उजुरी गर्नोस्
सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा भए नभएको निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईले ०७० को निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र पाए पनि अहिले लिष्टमा नाम नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो भएमा तत्काल निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाईको नाम मतदाता नामावलीमा छ भने अब तपाईले भोट दिन पक्का पाउनु हुनेछ । तर, ०७० सालपछि मात्रै यदि तपाइले फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता गराउनु भएको थियो भने तपाईको नाम निर्वाचन आयोगको वेभसाइटबाट अहिल्यै हेर्न सकिँदैन ।
त्यस्तो नामावलीको अध्यावधिक भइरहेकाले अहिले नै आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसका लागि केही दिन कुर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार नयाँ अध्यावधिक नामावली हेर्न कम्तिमा चैत २० गतेसम्म कुर्नुपर्नेछ ।
२. मतदान केन्द्र हेर्नुस्
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमै तपाईको निर्वाचन केन्द्र तोकेको हुन्छ । तर, अहिले निर्वाचन आयोगको वेभसाइडमा तपाईले भेट्ने मतदाता सूचीमा तपाईको मतदान केन्द्र जुन लेखिएको छ, अब त्यो लागू नहुन सक्छ र फेरिएको पनि हुन सक्छ । त्यो मतदान केन्द्र ०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाका लागि मात्र तोकिएको थियो । अब हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले मतदान केन्द्रहरु हेरफेर गरेको छ ।
तपाईले नयाँ अद्यावधि गरेको मतदाता नामावलीमा मात्र अगामी निर्वाचनमा तपाईले मतदान गर्ने मतदान केन्द्र तोकिएको हुन्छ । बैशाख ३१ गते तपाइले तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मात्र मत दिन सक्नुहुनेछ ।
३. भोट कसरी हाल्ने ?
मतदाता नामावलीमा तपाईको नाम निश्चित भएपछि अब तपाईले मतदान कसरी गर्ने भन्ने जान्नुपर्ने हुन्छ । ०६० र ०७० सालको निर्वाचनमा जस्तो तपाईले दुईवटा फरक मतपत्रमा मत दिनुपर्दैन । अब एउटामात्रै मतपत्रबाट आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्न सक्नुहुनेछ ।
तपाईले सेतो कागजमा रातो अक्षर प्रिन्ट गरेको मतपत्र पाउनु हुनेछ । त्यसमा २७ वटा दलको पार्टीको चुनाव चिन्ह हुन्छ । सबैभन्दा माथि नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह हुन्छ । दोस्रोमा एमाले र, तेस्रोमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हुन्छ ।
२७ नम्बरपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह राखिएको हुन्छ । दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये अब तपाईले कसलाई मत दिन चाहेको हो, त्यसलाई मत दिन सक्नुहुन्छ ।
मतपत्रमा क्रमश गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यको नामहरु क्रमशः हुन्छ । तपाईले आफूले चाहेको उम्मेद्वारलाई मत संकेत गर्न सक्नुहुनेछ ।
तपाईले स्थानीय तहको चुनावमा सात जना उम्मेद्वारका लागि भोट हाल्नुपर्छ । गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरु गरी ७ जनालाई भोट दिनुपर्ने हुन्छ । वडा सदस्यहरुमा एकजना दलित महिला उम्मेद्वार, एकजना महिला उम्मेद्वार र तीनजना पुरुष वडा सदस्यलाई भोट हाल्नुपर्छ ।
नगरपालिका वा महानगरपालिकामा पनि त्यसैगरी सात जनालाई नै भोट हाल्नुपर्छ । नगरपालिकाहरुमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र चार जना सदस्यहरुलाई भोट हाल्नुपर्छ ।
४. अझै बुझिएन ?
तपाईले मतदान गर्ने तरिका अझै बुझ्नुभएको छैन ? यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता गर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगले चैत २८ गतेदेखि देशभर एकै चोटि कम्तिमा २१ हजार मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गर्दैछ । उनीहरुले तपाईलाई कसरी मतदान गर्ने भन्नेकुरा सिकाउने छन् । ती स्वयम्सेवकसँग नमूना मतपत्र हुनेछ । र, उनीहरुले कसरी मतपत्र लिने र आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई भोट दिने कुरा सिकाउनेछन् । यस्तै दलका प्रतिनिधिले समेत यो कुरा सिकाउनेछन् ।
गत ०७० सालको निर्वाचनमा करिब ८ हजारमात्रै मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गरेकोमा निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनका लागि भने कम्तिमा २१ हजार मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन प्रणालीको कठिनाइ र छोटो समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले धेरै मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक परिचालन गरि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने रणनीति बनाएको हो ।
‘उत्तर कोरियाले चीनको अपमान गरिरहेको छ’
५० हजार बढीको ज्यान जाने गरी नेपालमा ८.६ रेक्टरको भूकम्प आउने सक्ने
२७ मङि्सर, २०७४
२५ मङि्सर, २०७४
प्रेमिकाको मायालु टोकाईले लियो युवकको ज्यान
अमेरिकी सहरको मेयरमा तेश्रोपटक पनि कुकुर निर्वाचित
न कुनै जागिर, न त जिम्मेवारी, १८ वर्ष उमेर पुगेपछि ६० हजार रुपैयाँ सित्तैमा पाइने
महिलाको गर्भबाटै हरायो ९ महिनाको बच्चा
झन्झटिलो बन्यो अनलाइनबाट हुने नक्सापास प्रक्रिया
बढ्न थाल्यो अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकको आगमन
काम र ‘काम’
उपत्यकामा दैनिक ७० भन्दा बढीलाई कुकुरले टोक्छन्
कार किन्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस् यी १० कुरा
फेसबुकमा हामी संग जोडिनुहोस
घटना र प्रवृत्ति
सर्वाधिकार सुरक्षित © 2016-2017: मेरो नेपाल अनलाइन || Powered & Design by मेराे नेपाल